Nei (uye Sei) Kupinza Kudzokorora muYako Dhijitari Isu | Martech Zone
Nei (uye Sei) Kupinza Kudzokorora muYako Dhijitari Isu
Chitatu, December 5, 2012 Chipiri, Zvita 4, 2012 Caroline Watts
Kudzokororazve, tsika yekushambadzira kushambadza kune vanhu vakambobatana newe pamhepo, rave chinhu chinodikanwa chenyika yekutengesa yedhijitari, uye nechikonzero chakanaka: ine simba rinotyisa uye inodhura zvakanyanya.
Kudzokororazve, munzira dzayo dzakasiyana, kunogona kushanda semubatsiri kune iripo dhijitari zano, uye kunogona kukubatsira iwe kuti uwane zvakawanda kubva kumishandirapamwe yauri kutomhanya. Mune ino posvo ini ndichavhara nzira shoma vashambadziri vanokwanisa kuwedzera retargeting kukwidziridza simba renzira dzavari kutoshandisa. Asi kutanga, heino mamwe mashoma kumashure pane tekinoroji pachayo:
Sei uye Nei Kuchinjazve Kushanda
Nenzira yaro yakapusa, kudzokera shure inoshandisa yakapusa, isingazivikanwe browser browser kuti shambadzira chete kune vanhu vakashanyira webhusaiti yako asi vakasiya vasina kutenga. Inoshanda kwazvo nekuti inotarisa kushambadza kwako kune vanhu vanoziva uye vangangofarira chigadzirwa chako kana sevhisi. Izvi zvinokutendera iwe kuti uwedzere shanduko pakati pemapato anofarira uye chengetedza mitengo yakaderera nekuchengetedza ako madhora emadhora kune vateereri vako vanokwanisa.
Iyoyo tekinoroji inogona zvakare kushandiswa kune kwakasiyana kumwe kudyidzana kwevatengi, senge kuvhura email, uye inogona kuve inoshamisa inoshanda inokwenenzvera kune zvimwe zvekushambadzira maturusi aunoshandisa kusvika kune vatsva vatengi kana kusangana neazvino.
Kudzokororazve Kwevanotsvaga Vashambadzi
Kana iwe uchipa yakakosha bhajeti ku PPC kutsvaga, Kudzokororazve kunofanira kunge kuchinyatso kuwedzerwa kune yako dhijitari arsenal. Kutsvaga kushambadzira ndeimwe yenzira dzakasimba kwazvo dzekutyaira kutanga traffic kune yako saiti, asi yakawanda sei iyo traffic inoshanduka pakushanya kwekutanga? Kana iwe wakaita sevazhinji vashambadzi, ruzhinji rwevanhu vaunounza kune yako saiti havatendeuke ipapo ipapo, kana vakatendeuka zvachose. Apa ndipo panodzokororwazve. Kudzokororazve kunobatsira iwe kuwedzera shanduko pakati pevakakosha tarisiro vakashanyira saiti yako, asi vasina kutenga.
Kana iwe uchivimba zvinorema pakutsvaga kwePCP, urikubhadhara mari yakanaka kuunza vanhu kune yako saiti, uye kudzorera zvekare kunogona kukubatsira iwe kuwedzera iyo mari. Kana iwe ukashandisa yakamisikidzwa kumhara mapeji ako akabhadharwa ekutsvaga traffic, zviri zvinoshamisa zvinoshamisa kudzosera vashanyi kubva kune yako yekumhara peji (s) futi.
Kudzokororazve kweMukati Vatengesi
Imwe yematambudziko makuru e zvemukati vatengesi iri kushandura vaverengi venguva dzose kuva vatengi. Kunyangwe hazvo kushambadzira zvemukati iri nzira inoshamisa inoshanda yekukurudzira kushanya kwewebhu kutsva, yakanaka ROI inowanzo kuve yakaoma kuwana. Kukurudzira kusaina email uye nekuwedzera kukosha nguva dzose kunogona kubatsira, asi zvingasawanzo kukwana. Kana iwe uri kubudirira kutyaira traffic kune yako zvemukati, asi iwe usiri kuona shanduko iwe yaungade, kudzorera zvakare kunogona kubatsira.
Unogona kudzosera vashanyi vanonanga kune yako saiti kuti vaverenge zvemukati, uye uvakurudzire kuti vatarise zvigadzirwa zvedu nemapeji ebasa. Zvemukati zvinovaka vateereri vanokodzera bhizinesi rako, uye kutarazve kumashure kunogona kukubatsira iwe kushandura iwo vateereri kuva vatengi.
Kudzokorora kweemail Vatengesi
Email kushambadzira chishandiso chakakosha chevashambadzi vazhinji veadhijitari. Kana iwe uchinge wakanangana neemail, zvinogona kunge zvisiri pachena mashandisiro ekushandisa kushambadzira senge kudzokororazve kunogona kubatsira, asi kudzoreredza email ndicho chishandiso chakakwana chevatengesi veemail.
Email retargeting inokutendera iwe kushandira kuratidza kushambadza kune chero munhu anovhura email, kungave kana kwete ivo kudzvanya kuburikidza. Fungidzira kana munhu wese anovhura maemail aigona kuona brand yako paanotsvaga pawebhu gare gare? Ndo chaizvo zvinogona kudzoreredzwa neemail. Iwe unogona chete kutumira maemail akawanda kwazvo usinganetese mazita ako, uye email kudzosera kumashure inopa mukana wekugara pamberi pevako vanogamuchira email pasina kuvadzvinyirira neakawandisa mameseji eemail.
Kana iwe uchizeza kutanga mushandirapamwe wekuratidzira nekuti iwe uri kutomhanyisa vakabudirira kushambadzira, zvaunotya zvinogona kunge zvisina chikonzero. Kudzokororazve kunogona kukubatsira kuti uwane zvakawanda kubva mumatanho auri kushandisa, chero nzira idzo dzingave dziri
Tags: zvemukati zvichitarisazveemail kudzokororayakabhadharwa kutsvaga kuchinjazveppc kudzokororakudzokera shure
Caroline Watts maneja wekushambadzira pa ReTargeter, izere-sevhisi yekuratidzira mupi anoshanda mukutarisisa zvakare uye kutarisa kwevateereri.
Kwayaka Metric: Zvemagariro Ekushambadzira uye Ongororo
Icho Chiso Chitsva cheKutsvaga Injini Kugonesa